घरमा बसेपछि लकडाउनमा मोटोपन पो बढ्दैछ कि ? अपनाउनुहाेस यस्ता उपाय — Sanchar Kendra
काठमान्डाै । घरमा बसेपछि केही न केही खाइरहन मन लाग्छ । खाना खाएको केही क्षणमै तलतल लाग्न थाल्छ । मनलाई नियन्त्रण गर्न सकिँदैन, केही न केही खाइरहन्छौँ । त्यसो त पारिवारिक माहोलमा मीठो-मसिनो बनाएर खान पनि मन लाग्छ । कतिपय त खानपानमा खुब सौखिन हुन्छन् । मीठो-मसिनो बनाउने जाँगर र सिप पनि हुन्छ । यस्तो अवस्थामा खानेकुराको डोज बढ्ने नै भयो ।अर्कोतिर, घरमा बस्दा शारीरिक श्रम वा गतिविधि कम हुन्छ । नियमित व्यायाम नगर्नेहरू त निस्क्रिय नै हुन्छन् । दिनभर बस्ने, मोबाइल चलाउने, टिभी हेर्ने, पुस्तक पढ्ने । फेरि खाने, सुत्ने ।
यो उपक्रममा थाहै नपाई मोटोपन बढ्न सक्छ । एकातिर खाना धेरै अर्कोतिर शारीरिक गतिविधि ठप्प हुन्छ भने यो नै मोटोपनको लागि पर्याप्त रहेको मानिन्छ । मोटोपन अहिले धेरैको लागि टाउको दुखाइको विषय बन्दैछ । मोटोपनले शरीर भद्दा हुने मात्र होइन, विभिन्न दीर्घरोगहरू पनि निम्त्याउँछ । त्यसैले मोटोपनसँगै हाम्रो चिन्ता पनि बढ्छ । सामान्यभन्दा बढी तौल हुनु भनेको शरीरमा रोगको सम्भावना बढ्नु पनि हो । त्यसैले सकेसम्म तौललाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ । असामान्य माटोपनले मधुमेह, उच्च रक्तचाप लगायत हृदय रोगको खतरा बढाउँछ ।
कसरी बढ्छ मोटोपन -माटोपन बढ्नुको केही कारण छन् । एक त हाम्रो जीवनशैली पनि मोटोपन बढ्नुमा जिम्मेवार हुन्छ । अस्तव्यस्त जीवनशैलीको कारण शरीरमा बोसोको मात्रा बढ्छ । त्यस्तै, जथाभावी र अनियन्त्रित खानपानले पनि मोटोपन बढ्छ । कतिपय हर्मोन परिवर्तनको कारणले समेत शरीरमा अस्वभाविक मोटोपन बढ्ने वा घट्ने हुन्छ । यसबाहेक वंशानुगत कारणले मोटोपन बढ्ने तथ्य बाहिर आएको छ ।
सामान्य हिसाबले हेर्दा, हामी खानाको रुपमा जति क्यालोरी लिन्छौँ, त्यस अनुरुप खर्च गरिएन भने तौल बढ्छ । – शरीरलाई आवश्यक्ताभन्दा बढी खानेकुराको सेवन ,निस्क्रिय जीवनशैली , वंशानुगत कारण , कतिपय अवस्थामा मनोवैज्ञानिक कारणले पनि मोटोपन बढ्छ , गर्भावस्थामा तौल बढ्न सक्छ ,केही यस्ता औषधि हुन्छ, जसले मोटोपन बढ्छ
कसरी घटाउने तौल ? तौल घटाउनका लागि धेरैले खानपानमा कटौती गर्छन् । तर, यो सही तरिका होइन । खानपानमा कटौती गर्दा शरीरलाई आवश्यक पोषक तत्वको अभाव हुन्छ । परिणमतः त्यसले रोग निम्त्याउन सक्छ । तौल घटाउनका लागि आफ्नो जीवनशैली परिवर्तन गर्नुपर्छ । खाने, बस्ने, सुत्ने समय नियमित हुनुपर्छ । शारीरिक क्रियामा जोड दिनुपर्छ । सधैं सक्रिय र फुर्तिलो हुनुपर्छ ।
खानपानमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । एकै पटकमा धेरै खाना खानु हुँदैन । सकेसम्म हल्का र सुपाच्य खानेकुरा सेवन गर्नुपर्छ । तारेको, भुटेको, मसलेदार, बोसोयुक्त खानेकुराले पनि तौल बढाउँछ । एकै स्थानमा लामो समय बस्ने, भोक लागेपछि एकैपटक धेरै खाने बानी त्याग्नुपर्छ । यताउता हिँड्ने, सानोतिनो शारीरिक काम गर्ने गर्नुपर्छ । तौल सन्तुलित राख्ने राम्रो काइदा हो, व्यायाम । नियमित रुपमा व्यायाम, योग गर्दा पनि तौल बढ्दैन ।
राति खाना खाने लगत्तै सुत्नुहुँदैन । खाना र सुत्ने समयबीच कम्तीमा तीन घण्टाको अन्तर हुनुपर्छ टेलिभिजन हेर्दै, कम्प्युटर, ल्यापटप, मोबाइल चलाउँदै खानेकुरा खानु हुँदैन। कति हुनुपर्छ शरीर अनुसार तौल ?हाम्रो शरीरको लम्बाइ र तौलको हिसाब बीएमआईबाट निकाल्न सकिन्छ । तपाईंले आफ्नो शरीरको लम्बाइ सेन्टिमिटरमा नाप्नुपर्छ र त्यसमा एक सय घटाउनुपर्छ । जस्तोकि, तपाईंको शरीरको लम्बाइ ५ फिट ५ इन्च छ भने तपाईंको सेन्टिमिटरमा यो एक सय ७० सेन्टिमिटर हो । अब यसबाट एक सय घटाइदिने हो भने, बाँकी ७० रहन्छ । अतः तपाईंको उचाइ ५ फिट ५ इन्चको छ भने, तौल ७० केजी हुनुपर्छ । योभन्दा कम वा बढी तौल सही हुन्न ।
शिक्षाको अर्थ राम्रो किताबी ज्ञान नभएर एउटा असल संस्कारी शिक्षाको कुरा